Unoita Makomendi Akaenzana Kutendeuka? | Martech Zone
Chipiri, Gunyana 14, 2008 China, Gumiguru 3, 2019 Douglas Karr
Ndakaita ongororo yeblog rangu vhiki rino kuti nditsvage kuwirirana pakati pemigumisiro yangu yekutsvaga injini, zvinyorwa zvangu zvinonyanya kuzivikanwa zveblog, zvinyorwa nezvakanyanya kutaurwa, uye zvakatumirwa izvo zvakakonzera mari nekuda kwekutaurirana kana kutaura kwekuita.
Pakanga pasina kuwirirana.
Kuongorora zvinyorwa zvangu zvinonyanya kufarirwa, iwe unowana WordPress Yekubatana Fomu, Huntington Bank Sucks, ini ndakasiya Basecamp, uye kureba kweEndaneti Kero kutakura kwakanyanya traffic. Iwo maposta anotungamira nzira yekutsvaga Injini Mhedzisiro. Izvo zvirevo zvinotakura zvakanyanya kutaurwa. Nekudaro, izvo zvinyorwa zvakangopa chete madonhwe emadhora (uye nemikombe miviri yekofi) muhomwe yangu.
IMHO, kushandisa makomendi seichiyero chebudiriro kwakajairika, asi zvinotungamira ku mazhinji emablog mablog anokundikana.
Nezve 1 kunze kwevamwe 200 vashanyi vanouya kublog rangu uye vanosiya chirevo. Chikamu chidiki cheavo chakashata, ruzhinji vanhu ini ndine hukama hwehukama ne… uye vashoma, kana varipo, ndinoita bhizinesi navo. Muchokwadi, imwe yemakondirakiti angu makuru gore rapfuura iri raive kubva pachiratidzo chakaratidza hunyanzvi hwangu mune yakatarwa tekinoroji (uye yakarongedzwa mushe), asi ndisina zvirevo zvacho.
Dambudziko harisi blogging, hongu. Ndine yakawanda yekuverenga pane yangu blog - asi ini ndinoshaya kuenderera kwekugara ndichinyora zvemukati pane zvidzidzo zvinonditenderedza kutendeuka kwandiri. Zvakare, ini handina yekufona kuti ndiite padivi rangu rerutivi.
Ndagara ndichiyera kubudirira kwangu nenhamba yevanyorese veRSS uye iko kuita (kuburikidza nezvakataurwa pablog rangu). Ndiri kufunga zvekare zano iri! Kana ini ndichida kutyaira mari uye kushandisa iyi sebhizinesi blog, ini ndoda kunongedza zvemukati mangu kuti ndikunde mukutsvaga pamitemo inoenderana neicho chinotyaira mari. Ini ndinodawo kupa Nzira pane yangu saiti kutora uye kuyera iko kushandurwa.
Ini handitendi kuti makomendi akaenzana shanduko, uye haafanire kuve chiyero chebudiriro yako blog.
Kunze kwekunge iwe uchigona neimwe nzira kuenzanisa chiitiko ichi kune bhizinesi mhedzisiro, zvinongova zvisina maturo metric. Izvi hazvireve kuti ini handidi makomendi… zvinongova zvekuti handisi kuzoshandisa makomendi sechiratidzo chekuti blog rangu riri kuita nemazvo.
Tags: advanced media mediakunyatsoshandaMichael Stelznermobile kubhadharapage speedkusazvinyorawikiality
Gumiguru 14, 2008 na2: 25 PM
Ini ndoda kuve wekutanga kutaura pamusoro pezvisina kukosha zvekupindura. Great post!
Gumiguru 14, 2008 na4: 40 PM
Ini ndinobvuma kuti makomendi haasi iwo ega muyero wekubudirira.
Pane mukana wakakura wekuvandudza chishandiso kuburikidza blogging. Isu tiri dhizaini uye yekuvaka kambani inoshanda mumachechi. Isu tinosiyanisa nekuvandudza ruzivo uye nzwisiso pamusoro pevatengi vechechi kupfuura zvavainazvo. Yedu blog inotibvumidza kuratidza iro ruzivo uye nekubatana nevatungamiriri vechechi zvikwata munhaurirano dzinovimba zvirinani kuvagadzirira ushumiri. Mablog edu anoita sechimwe chikamu chedu zano kuita zvine simba kuita kudaro.
Nguva icharatidza kukosha kuzere.